Moments Neshamwari 51
Chii chinonzi chidzidzo chekudzikinura, uye chinogona kuyananiswa sei nemutemo we karma?
Kana kuyananiswa kuchinge kwatorwa chaiko, uye zvikonzero zvinonzi zvaita kuti rudzikunuro rwunofanirwa kutariswa sezvazviri, hapana tsananguro inonzwisisika yedzidziso iyi; hapana tsananguro inogona kuve inonzwisisika. Dzidziso yacho haina musoro. Zvishoma zvinhu munhoroondo zvine mukurumbira muhuipi, zvakaipisisa pakurapwa, zvinosemesa kufunga uye zvakanakira kururamisira, sedzidziso yekuregererwa. Dzidziso ndeiyi:
Iye mumwechete Mwari, akazvirarama mukati menguva dzese, akasika matenga nepasi nezvinhu zvese. Mwari vakasika munhu vasina mhosva uye nekusaziva, ndokumuisa mubindu remafaro kuti aedzwe; uye Mwari akasika muidzi wake; uye Mwari akaudza munhu kuti kana akakundwa nemuyedzo achafa zvirokwazvo; Mwari vakaitira mukadzi Adhama uye vakadya muchero wavakarambidzwa namwari kudya, nekuti vaitenda kuti yaive chikafu chakanaka uye chaivapa huchenjeri. Ipapo Mwari vakatuka nyika, uye vakatuka Adhama naEvha uye vakavadzinga mubindu, uye vakatuka vana vavanofanira kubereka. Uye rushambwa rwekusuwa nekutambudzika uye rufu rwakava pamusoro pevanhu vese venguva yemberi nekuda kwekudya kwaAdamu naEvha muchero uyo wavakarambidzwa kudya. Mwari aisakwanisa kana kusazoregedza kutuka kwake, sekutaura, “akapa Mwanakomana wake mumwechete,” Jesu, sechibairo cheropa kubvisa kutukwa. Mwari vakagamuchira Jesu seyananiso nekuda kwekuita kwakashata kwevanhu pamamiriro ezvinhu ekuti "ani naani anotenda kwaari arege kufa," uye nevimbiso yekuti nekutenda kwakadaro "vaizove neupenyu hwusingaperi." Nekuda kwekutuka kwaMwari, mweya yega yega yaakagadzirira iyo imwe neimwe yakazvarwa munyika, ikatongerwa, uye mweya umwe neumwe waunoita uchafa, kuti utambure munyika; uye, mushure mekufa kwemuviri mweya unoendeswa kugehena, uko kwaisingafi, asi uchifanira kutambudzika zvisine magumo, kunze kwekunge mweya iwowe usati wazvifira kuti uri mutadzi, uye uchitenda kuti Jesu akauya kuzoponesa kubva kuzvivi zvake ; kuti iro ropa iro Jesu anonzi akadeura pamuchinjiko mutengo unogamuchirwa naMwari wemwanakomana wake mumwechete, seyananiso yechivi uye nerudzikunuro rwemweya, uye ipapo mweya unogamuchirwa mushure mekufa kudenga.
Kune vanhu vakaunzwa pasi pesimba rekare rakanaka maitiro ekereke yavo, uye kunyanya kana vasingazive mutemo wechisikirwo wesainzi, kuzivikanwa kwavo nezvirevo izvi kuchanatsa pamusoro pechisiri chavo uye kuvadzivirira kuti vasaratidzika kunge vanoshamisa. Kana yaongororwa muchiedza chechikonzero, vanoonekwa mukuvanzika kwavo kwekushama, uye kwete moto wese wegehena unotyisidzirwa unogona kudzivirira uya kuona zvakadaro kushora dzidziso iyi. Asi uyo anoshora dzidziso haafanire kushora Mwari. Mwari haana mhosva nedzidziso.
Dzidziso chaiyo yekuregererwa haigone kuyananiswa nemutemo wekarma, nekuti ipapo kuyananisirwa kwaigona kuve kuri kwechimwe chezviitiko zvisina kurongeka uye zvisina musoro zvakambonyorwa, nepo, karma ndiwo mutemo unoshanda. Kana iko kuyananiswa kuri chiito chekururamisira kwaMwari, saka kutonga kwaMwari kwaigona kuve kuri kwakaipa uye kusaruramisira kupfuura chero zviito zvisiri murairo zvemutadzi. Kune kupi baba vangapa mwanakomana wavo mumwe chete kuti atambudzwa uye nekurovererwa, kuurayiwa, nemanins akawanda akagadzirwa naiye, uye iye, nekuda kwekusaziva kwake kuvaitisa kuti vaite zvinoenderana nekunakirwa kwavo, anga ataura kutukwa kwekuparadzwa pamusoro pavo; akabva atendeuka kubva mukutuka kwake uye akabvuma kuvaregerera kana vaizotenda kuti akavaregerera, uye kuti kufa uye kuteurwa kweropa remwanakomana wake kwakavaregerera kubva pane zvavakaita.
Hazvibviri kufunga nezvenzira yakadai yekuita seyamwari. Hapana munhu aigona kuzvitenda kuti ndewomunhu. Wese anoda kutamba kwakaringana uye kururamisira anganzwira tsitsi manikins, anonzwira tsitsi uye hushamwari hwemwanakomana, uye anoromba baba. Anoda kururamisira angashora fungidziro yekuti manikins anofanirwa kutsvaga kukanganwirwa kwevaimugadzira. Aizodaidzira kuti iye anogadzira anofanira kutsvaga kuregererwa kwavo nekuvaita manikins, uye anoomerera kuti iye anogadzira anofanira kumira uye agadzirise zvikanganiso zvake zvakawanda uye aite zvakanaka zvese zvaakakanganisa; kuti anofanira kubvisa zvachose kusuwa nekutambura kwaakange aunza kuunzwa munyika uye nezvaakataura kuti aive neruzivo rwepamberi, kana zvimwe, kuti anofanira kupa manikins ake, kwete kungofunga simba rakaringana bvunza kururamisira kwavaranda vake, asi nehungwaru hwakaringana kuti vagone kuona kururamisira mune izvo zvaakaita, kuti vatore nzvimbo yavo munyika, vobva vaenderera mberi nebasa ravakapihwa, pachinzvimbo chekuva varanda. vamwe vacho vanoita kunge vanofarira hupfumi husina kudzidza uye mafaro, zvinzvimbo uye zvakanakira izvo hupfumi uye kubereka kunogona kupa, nepo vamwe vachirarama neupenyu nenzara, kusuwa, kutambudzika uye chirwere.
Kune rimwe divi, hapana chekufungidzira kana tsika ndeye waranti yakakwana yekuti murume ati: murume ndiko kugadzirwa kwekushanduka-shanduka; kushanduka chiito kana mhedzisiro yechiitiko chemapofu simba uye chinhu chemapofu; rufu runopedza zvese; hapana gehena; hakuna muponesi; hakuna Mwari; hapana ruramisiro muchadenga.
Zvine musoro kutaura kuti: kune kururamisira kune zvakasikwa; nekuti kururamisa ndiko kuita kwakakwana kwemutemo, uye zvakasikwa zvinofanirwa nemutemo. Kana mutemo uchidikanwa kumhanya kwechitoro chemuchina kuti udzivise kupaza, mutemo hausati uchidikanwa kuitira kumhanya kwemashini echadenga. Hakuna institution inogona kuitiswa pasina kutungamira kana kuchenjera kwekuwedzera. Panofanira kuve nehungwaru muchadenga hwakakura zvakakwana kutungamira mashandiro ahwo.
Panofanira kuve nechimwe chokwadi mukutenda kuregererwa, uko kwakararama uye kwakawana kugamuchirwa mumoyo yevanhu kweanoda kusvika zviuru zviviri zvemakore, uye nhasi vanosvika mamirioni evatsigiri. Dzidziso yekuregererwa iyi yakavakirwa pane imwe yezvokwadi huru dzekuchinja kwemunhu. Chokwadi ichi chakavezwa uye chakamonyaniswa nepfungwa dzisina kudzidza uye dzisina kudzidza, pfungwa dzisina kukwana zvakakwana kuzvitakura. Iyo yakarerwa neudyire, pasi pesimba rehutsinye uye kuuraya, uye ikakura kuva fomu yazvino kuburikidza nemazera erima ekusaziva. Izvo zvisingasviki makore makumi mashanu kubvira vanhu vakatanga kusava nechokwadi nedzidziso yekuregererwa. Iyo dzidziso yakararama uye ichararama nekuti pane chimwe chokwadi mune zano rehukama hwemunhu kuna Mwari wake, uye nekuda kwepfungwa yekuzvipira kune zvakanakira vamwe. Vanhu vava kutanga kufunga nezvepfungwa mbiri idzi. Hukama hwemunhu kuna Mwari wake, uye kuzvipira kune vamwe, ndizvo zvokwadi mbiri idzi padzidziso yekuregererwa.
Munhu izita rakarehwa rinoshandiswa kurongedza sangano revanhu nemisimbiro yaro yakawanda uye zviumbwa. Sekureva kwechiKristu, munhu chisikwa chine katatu, chomudzimu, mweya uye muviri.
Muviri wakagadzirwa kubva pazvinhu zvepasi, uye uri wenyama. Iwo mweya ndiyo fomu iri mukati kana mukati mayo iyo chinhu chenyama chakaumbwa, uye mairi mune pfungwa. Ipfungwa. Iwo mweya ndihwo hupenyu hwese hwese hunopinda mukati uye hunoita mupenyu mweya nemuviri. Inonzi yemweya. Mweya, mweya nemuviri zvinoumba munhu wechisikigo, munhu anofa. Parufu, mweya kana hupenyu hwomunhu hunodzoka kuupenyu hwese; Muviri wenyama, unogara uchitarisana nerufu uye nekushomeka, unodzoka kuburikidza nekuparadzaniswa muzvimiro zvemuviri kubva mairi; uye, mweya, kana chimiro chechisimba, semumvuri-wakafanana, unopera pamwe nekushomeka kwemuviri uye unobatwa nezvinhu zveastral uye zvepfungwa yenyika iyo kwayakabva.
Zvinoenderana nedzidziso dzechiKristu, Mwari utatu muna Kubatana; vatatu vanhu kana zvinyorwa zvemubatanidzwa mumwe wezvinhu. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, uye Mwari Mweya Mutsvene. Mwari baba ndivo musiki; Mwari Mwanakomana ndiye Muponesi; Mwari Mweya Mutsvene ndiye munyaradzi; izvi zvitatu zvinogara mune humwari humwe.
Mwari pfungwa, kuzvirarama, pasati pasikwa nekutanga kwaro. Mwari, pfungwa, dzinoratidzika sezvisikwa uye seuMwari. Pfungwa inoshanda kuburikidza nechisikwa inogadzira muviri, chimiro uye hupenyu hwemunhu. Uyu ndiye munhu wepanyama anotongerwa rufu uye uyo anofanira kufa, kunze kwekunge amutswa pamusoro porufu nekupindira kwaMwari mukati meyekusafa.
Pfungwa ("Mwari baba," "baba vari kudenga") ndiyo pfungwa yepamusoro; anotumira chikamu chake, ray ("Muponesi," kana, "Mwari Mwanakomana"), pfungwa yepasi, kupinda uye kugara mumunhu akafa kwenguva yakati rebei; Mushure menguva iyoyo, pfungwa yepasi, kana ray kubva kumusoro, inosiya unofa kuti idzokere kuna baba, asi inotumira imwe nzvimbo ("Holy Ghost," kana, "Munyaradzi," kana "Mudziviriri"), mubatsiri kana mudzidzisi, kubatsira iye aive agamuchira kana kugamuchira pfungwa yemuviri semuponesi, kuti azadzise basa rayo, iro basa raakange agadzirira. Kuverengerwa chikamu chepfungwa dzamwari, inonzi zvechokwadi mwanakomana wamwari, aive uye ari kana anogona kuve mudzikunuri wemunhuwo kubva muchivi, uye mununuri wake kubva kurufu. Munhu anofa, iye munhu wenyama, maakapinda kana kuti angapinda, dai, nekuvapo kwehumwari mukati make, adzidza nzira yekushandura uye anogona kuchinja kubva mune yake yemusikirwo uye inofa mamiriro ezvinhu kupinda mune yehuMwari uye yekusafa mamiriro. Zvisinei, kana, munhu asingafanire kuenderera neshanduko kubva kune inofa kuenda kune kusafa, iye anofanira kuramba ari pasi pemutemo wekufa uye anofanira kufa.
Vanhu vepanyika havana kubva pamurume mumwechete uye mukadzi akafa. Wese munhuwo zvake ari munyika ari munhu anonzi mune munhuwo zvake akafa nevamwari vazhinji. Kune munhu wese munhu aripo kuna mwari, pfungwa. Muviri wega wega uri munyika uri munyika kwenguva yekutanga, asi pfungwa dziri kuita mukati, ne, kana, mukati, vanhu venyama vari munyika havasi kuita izvozvi kwenguva yekutanga. Pfungwa dzakamboita zvimwe chete nemimwe miviri yevanhu yadzo munguva dzakapfuura. Kana isina kubudirira mukugadzirisa uye nekukwenenzvera chakavanzika chekudzikiswa uye nekuregererwa uchibata kana mune iye zvino muviri wemunhu, iwo muviri nemuviri (mweya, psyche) uchafa, uye iyo pfungwa inobatana nayo ichafanirwa kudzokazve mumuviri kusvika zvakare. kujekerwa kwakakwana kwave kuvepo, kudzamara iko kuyananisirwa kana iko-kwemaonero kwapera.
Pfungwa inogara mumuviri chero wemunhu ari Mwanakomana waMwari, huya kuzoponesa murume iyeye kubva kurufu, kana iye munhuwo zvake achinge ave nekutenda mukugona kwemuponesi wake kukurira rufu nekutevera Shoko, iro muponesi, pfungwa yemuviri, inozivisa ; uye dzidziso iyi inotaurwa muchidimbu zvichienderana nekutenda kwemunhuwo maari. Kana munhu akagamuchira pfungwa yemuviri semuponesi wake uye ndokutevera mirairo iyo yaanobva agamuchira, anozochenesa muviri wake kubva pakusachena, anomira zvisizvo (achitadza) nechiito chakarurama (Kururama) uye achachengeta muviri wake unofa ari mupenyu kusvikira adzikunura. mweya wake, iyo psyche, chimiro chemuviri wake wenyama, kubva kurufu, ndokuiita kuti chisafa. Iyi nzira yechiitiko yekudzidziswa kwemunhuwo kufa uye kuishandura kuita kusafa ndiko kurovererwa. Pfungwa dzakarovererwa pamuchinjiko wayo wenyama; asi nekurovererwa pacheke icho chinofa, chiri parufu, chinokunda rufu uye unowana hupenyu hwokusafa. Ipapo chinofa chafuka kusafa uye chamutswa munyika yevachiri kufa. Mwanakomana wamwari, pfungwa yemuviri yakabva yaita basa rake; akaita basa iro raanofanira kuita, kuti akwanise kudzokera kuna baba vake kudenga, pfungwa dzakakwirira, dzaanova mumwe. Kana, zvakadaro, murume akagamuchira pfungwa yemuviri semuponesi wake, asi ane rutendo kana ruzivo rwusina hukuru zvakakwana kuti vatevedze dzidziso yaaka gamuchira, ipapo pfungwa yemuviri ichiri kurovererwa, asi iko kurovererwa nekusatenda uye kusahadzika. chewe chinofa. Iko kurovererwa kwemazuva ese uko iyo pfungwa dzinotsungirira mukati mayo kana pamuchinjiko wayo wenyama. Kumunhu, nzira ndeiyi: Muviri unofa. Hutano hwepfungwa kuenda mugehena, ndiko kuparadzaniswa kweiyo pfungwa kubva kuchivi cheyenyama uye nezvido zvenyama panguva yemafiro. Kumuka kubva kuvakafa, ndiko kuparadzaniswa kubva pakuchiva. Kukwirira kudenga uko kwaano “tonga vanokurumidza uye vakafa,” kunoteverwa nekutarisa kuti ndechipi chichava mamiriro emuviri unofa uye psyche, iyo ichagadzirirwa dzinza rake rinotevera mupasi, nechinhu chekuratidzira. kuvhenekerwa uye kuyananiswa.
Kune murume akaponeswa, ane pfungwa dzakavadzika mumuviri zvinoita kuti kusafa, hupenyu hwese hwaJesu hunofanira kupfuura kuburikidza nekugara mumuviri wenyama mumuviri wepanyama. Rufu runofanira kukurirwa muviri usati wafa; kubereka mugehena kunofanirwa kunge kusati kuri shure kwekufa kwemuviri; kukwira kudenga kunofanirwa kuwanikwa ipo muviri wenyama uri mupenyu. Zvese izvi zvinofanirwa kuitwa nehana, nekuzvidira, uye neruzivo. Kana zvisiri, uye munhu achingova nekutenda kwepfungwa yake isingaverengeke seMuponesi, uye kana, kunyangwe achinzwisisa kuti sei asi asinga zive hupenyu hwokusafa asati afa, anofa, zvino inotevera nguva yekubuditswa mumhepo yepasi uye mune izvo zvemunhuwo anofa, pfungwa hadzizopinde muchimiro chemunhu chaakadana kuti zvivepo, asi pfungwa dzinoshanda saMunyaradzi (Holy Ghost), anoshumira kumweya wemunhu uye anotsiva mwanakomana wamwari. , kana pfungwa, yakanga iri mumuviri muhupenyu hwapfuura kana hupenyu. Izvo zvinozviita nekuda kwekugamuchirwa kwekutanga kwepfungwa nemurume semwanakomana waMwari. Ndiye munyaradzi wakamupoteredza iye unokurudzira, kupa zano, nekuraira, kuti, kana munhu achida, atore basa rekusafa rakasiiwa paupenyu hwapfuura, apfupikiswe nerufu.
Vanhu vasingazotendeukiri kune iwo mwenje wechiedza, vanofanirwa kugara murima uye vachiteerera mitemo yekufa. Vanotambura nerufu, uye pfungwa dzakabatana navo dzinofanira kupfuura nemugehena panguva yehupenyu, uye panguva yekuparadzaniswa kwayo kubva pakubatana kwayo kwepashure mushure mekufa, uye izvi zvinofanirwa kuenderera mberi nemazera, kusvikira azvipira uye kugona kuona mwenje, kusimudza unofa kune kusafa uye kuti ubatanidzwe pamwe nevabereki muvambi wayo, baba vavo vari kudenga, vasingaguti kusvikira kusaziva kwapa nzvimbo zivo, uye rima richishandurwa kuva chiedza. Maitiro aya akatsanangurwa mukati the Hwirorials Kurarama Nokusingaperi, Vol. 16, Nosi. 1-2, and in Moments ne Shamwari muIzwi, Vol. 4, peji 189, uye Vol. 8, peji 190.
Neiyi nzwisiso yedzidziso yekuregererwa munhu anogona kuona izvo zvinoreva "uye mwari vakada nyika zvekuti akapa Mwanakomana wake mumwechete, kuti ani nani unotenda maari arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi." Neiyi nzwisiso, dzidziso yekuregererwa inowiriranwa pamwe nemutemo wekusavanzika usingaperi unogara narini uye nekusingaperi kururamisira, iwo mutemo wekarma. Izvi zvichatsanangura hukama hwemunhu nemwari wake.
Icho chimwe chokwadi, iyo pfungwa yekuzvipira kuitira vamwe zvakanaka, zvinoreva kuti kana munhu awana uye nekutevera pfungwa dzake, mwenje wake, mununuri wake, uye akakunda rufu nekuwana hupenyu hwokusafa uye achizviziva kuti haana kufa, vasingagamuchire mufaro wedenga waakange awana, iye ega, asi, panzvimbo yekugutsikana nekukunda kwake pamusoro porufu, uye nekunakidzwa ega nezvibereko zvebasa rake, anosarudza kupa masevhisi ake kuvanhu kuti aburitse kusuwa nekutambudzika kwavo, uye uvabatsire kusvika pakuwana huMwari mukati, uye nekuzadzisa iyo apotheosis yaakasvika. Ichi chibairo chomunhu wega kune Wega wepanyika, wepfungwa dzemunhu kune wePfungwa dzese. Ndiye mwari mumwe nemumwe achive nekunetsana naMwari wepasirese. Iye anoona uye anonzwa uye anozviziva iye amene mumweya wega wega mupenyu, uye mweya wega wega kunge uri maari. Iyo ndiyo I-am-You uye Iwe-Ndiwe-ini nheyo. Mune mamiriro ezvinhu aya kunoonekwa huve baba vaMwari, hukama hwevanhu, chakavanzika chekuumbwa kwemweya, kubatana uye humwe hwezvinhu zvese, uye kuzara kweIye.